Saud al-Faisal: Dagaalkani waxa keliya oo uu dhalinayaa is-afgaran waa iyo dhiig-qubta.
Wasiirka arimaha dibada Sucuudiga, amiir Saud al-Faisal, oo sharaxayey dagaalka Ciraaq, wuxuu waraysi ugu sheegay Barbara Walters oo katirsan ABCNews in "dagaalkan uu dhalinayo oo keliya is-afgaranwaa, dhiig-qubta iyo siyaadin nacayb iyo kordhin walaac gobolka ah". Waraysigaas oo lagu qaaday qalabka satellite-ka. Waxa uu Amiirku ku baaqay xabad-joojin. [eeg waraysigaas].
Sida ay werisey warbaahinta Australia , waxaa Kuwait laga celiyey laba askari oo Ingiriis ah kadib markii ay diideen in ay ka qayb galaan dagaalka Ciraaq. Waxaa warku intaas ku daray in lataliyaha xagga sharciga kala taliya labadaas askari oo magaciisa la yiraahdo Gilbert Blades uu yiri askartaasi "ma rabaan in ay ka qayb qaataan dilka dad shacab ah oo aan dembi lahayn". ayuu warku sheegay.
Warar ay werisey hay'adda reuters ayaa sheegay in ciidanka Maraykanku ay dileen 7 dumar iyo carruur isugu jira. Sida warku sheegay waxay arintani isniintii ka dhacday Najaf kaddib markii ciidanka US ay rasaas ku fureen gaari ay saaraayeen 13 qof oo carruur iyo dumar ah, waxaa halkaas ku dhintay 7 carruur iyo dumar ah, waxaana dhaawacmay labo, afarna wax ma gaarin. Waxaana wararku sheegeen in gaarigu markii uu istaagi waayey rasaasta lagu furay.
Dhanka kale IOL oo soo xiganeysey AFP waxay werisey in tuulada Janabiyah ay ku dhinteen qoys ka kooban shan qof kaddib markii ay ku dhacday rasaas kasoo dhacaysay diyaaradaha dagaalka, qoyskaas oo hurday meel beer ah. Waxaa dadka tuuladaas degani soo sheegeen in tuuladaas ay ku dhinteen 20 qof oo ay ku jiraan 11 carruur ah. Arintani waxay dhacday waqtiga ciraaq markii uu ahaa 4:30 galabnimo ee maalintii Isniinta, sida uu sheegay Canada TV.
Madaxweynaha Maraykanka, Bush, ayaa Isniintii sheegay in maalmihii bilowga ahaa horumar laga gaarey dagaalka ciraaq, waxana uu sheegay in sababta dagaalka loo galay in ay ahayd in la xoreeyo dadka reer Ciraaq kaddib markii bilo xooga la saaray in Saddam Xuseen hubka laga dhigo.
Qoraal dheer oo Isniintii ay qortay Shabakadda Reuters ayaa cinwaan ka dhigay "Ilaa hadda Ciraaq laguma hayo calaamad muujineysa hubka hal-mar-wax gumaada". Qoraalka waxay kusii dartay in dagaalka oo ilaa hadda socdey 12 maalmood aan Ciraaq laga helin hubka wax burburiya, oo ahayd sababtii ugu weyneyd ee dagaalka loo galay, waa sida warku u dhigaye.
Dhanka kale waxaa TV-ga Ciraaq Isniintii la iska tusay Saddam xuseen oo golihiisa wasiirada qaarkatirsan la shiraya oo ay la joogaan labadiisa wiil.
Inkasta oo bambooyinka iyo sawaariikhdu ay gilgileen Baqdaad, hadana waxaa isniintii wadada Ramadan 14th street oo ku taal faras-magaalaha Baqdaad lagu qabtay arooskii u horeeyey oo meel barxad ah lagu qabto ilaa uu dagaalka Ciraaq bilaabmay 12 maalmood ka hor. Sidaas waxaa weriyey warbaahinta shiinaha ee loo yaqaan xinhua.
50 gaari oo lagu qurxiyey ubaxyo oo gelbinayey caruuska iyo caruusada ayaa lasoo mariyey wadooyinka magaalada Baqdaad oo ah magaalo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 5 million oo qof. Dad aad u farabadan ayaa wadooyinka isugu soo baxay si ay farxada caruurskaas ugu muujiyaan, ayadoo dumarku mashxaradayeen ayaa warku kudaray. Waxaana xinhua sheegtay in dadka Baqdaad dibada ka ah aysan marnaba u qaadan karayn in arintan arooska ah oo kale lagu qabtay Baqdaad oo la duqaynayey ilaa March 20, 2003. Taas oo Xataa isniintii lagu sii wadey duqaynta.
Bangiyada iyo dukaamadu wey furaayeen. Korontada iyo biyuhuna waa caadi. Laakiin qiimaha rootiga, khutaarta, ukunta iyo hilibka ayaa laba-laabmay ama saddex laabmay maalmihii ugu dambeeyey. Gawaarida magaalada socota waa caadi maalintii, habeenkiise dareewalada qar-iska-xoorka ah oo kaliya ayaa socda, ayey warka ku dartay hay'adda shiinaha ee xinhua.
Wasiirka dhaqanka Ruushka oo liiska taalooyinka Ciraaq siiyey Maraykanka.
Sida ay werisey hay'adda Ruushka wararka u faafisa ee loo yaqaan interfax, wasiirka dhaqanka Mikhail Shvydkoi ayaa liiska meelaha leh qiimaha taariikheed iyo dhaqan ee kuyaal Ciraaq ku wareejiyey safiirka Maraykanka Alexander Vershbow. Sida hay'addu sheegtay liiskaaswaxaa soo diyaariyey qof khibrad gaar ah leh oo ka tirsan qaybta hidaha iyo dhaqanka Ruuska, waxaana kamid ah naqshadda Babylon, Mesopotamiya shaxdeedii. Waxaana hay'addu sheegtay in warkaas uu u sheegay qofka wasiirka u qaabilsan warfidinta, waa sida kucad warka ay interfax faafisay Isniintii.
[waxaa markiiba shqo siiyey wargeyska Dialy Mirror ee kasoo baxa UK]
QORAAL FAAHFAASAN OO KUSAABSAN ARNETT .. GUJI HALKAN
Peter Arnett, Sawirka IOL
Peter Arnett oo ah weriye caan ka ahMaraykanka oo kusoo caan baxay kasoo waramidii dagaalkii Vietnam iyo dagaalkii khaliijka (Gulf war) ayaa isniintii laga casiley shaqadii weriyenimada ee uu wararka uga soo diri jirey TV-ga NBC iyo MSNBC. Sababta weriyaha lagu casileyna waxay ka dambeysey kaddib markii uu waraysi siiyey TV-ga Ciraaq uuna waraysigaas ku sheegay in "qorshihii koowaad ee dagaalku khasaaray sababtuna ay tahay caabinta ka timid Ciraaq". Inkasta oo markii hore TV-ga NBC uu difacey weriyaha hadana markii dambe waxaa TV-gu sheegay sidan: "Waa khalad in Mr. Arnett uu wararysi u ogolaado TV ay Ciraaq xukunto, gaar ahaan xiligaan dagaalka". Sida ay werisey AFP. "Sidaas daraadeed" ayaa tv-gu ku daray in "Peter Arnett uusan weriye u ahayn NBC News iyo MSNBC".
Peter Arnett wuxuu Baqdaad wararka uga soo tebin jirey NBC iyo National Geographic Explorer. Sannadkii 1991-kii wuxuu Baqdaad wararka uga soo dirijirey CNN xiligii uu socdey dagaalkii Khaliijka markaas oo uu aad ugu soo caan baxay. Peter Arnett wuxuu haystaa dhalashada Maraykanka, wuxuuna ku dhashay dalka New Zealand.
Sidoo kale war kusoo baxay shaashadda Nationalgeographic ayaa sheegay in Peter Arnett laga ruqseeyey shaqadii weriyenimada ee uu u hayey Nation Geographic, taas oo uu uga soo warami jirey Baqdaad. Peter Arnett wuxuu ka cudur daartay ama dadka maraykanka ka raali geliyey hadalkii uu ka sheegay ama siiyey TV-ga Ciraaq gacanta ku hayso.
Sida ay werisey warbaahinta Australia ee abc, wargeyska Daily Mirror oo ka soobaxa Ingiriiska ayaa markiiba shaqo siiyey weriyaha uu TVga NBC ee Maraykanka laga leeyahay shaqada ka cayriyey ee Peter Arnett. "waxaan ka warbixiyaa runta waxa ka dhacaya Baqdaad, taasna raaligelin ka bixin maayo" ayuu u sheegay wargeyska Mirror oo ah wargeys ka mid ah kuwa ugu horeeya ee kasoo horjeeda in dagaalka Ciraaq uu Ingiriisku ka qayb qaato. QORAAL FAAHFAASAN OO KUSAABSAN ARNETT .. GUJI HALKAN
Baqdaad: Sawirka CBC
Duqaynta cirka ee lagu qaaday magaalooyinka Ciraaq ayaa maalmihii ugu dambeeyey aad u sii xoogaysatey. Maj. Gen. Stanley McChrystal oo warsaxaafadeed qabtay ayaa sheegay in ilaa markii dagaalku bilowday 8,000 oo gantaal oo ah kuwa hago lagu gamey Ciraaq � 3,000 oo kamid ah gantaaladaasna latuuray Sabtidii iyo Axadii lasoo dhaafay, sidaas waxaa weriyey TV-ga Canada ee CBC.
Waxaa kale oo isla telefishankaasi ku waramay in Isniintii uu dagaal kulul ka dhacay meel Baqdaad u jirta 80km halkaas oo ah Hindiyah.
WARARKII: March 31, 2003
Madaxweynaha Masar, Xusni Mubaarak [Hosni Mubarak] ayaa maanta oo Isniin ah sheegay in dagaalka Ciraaq ee uu Maraykanku hogaaminayo uu soo saari doono "boqol bin laden cusub" kaas oo muslimiin badan ka dhigi doona dagaalyahano kasoo harjeeda reer galbeedka, sidaas waxaa werisey reauters. WARKAN OO DHAN...GUJI 31/3
Robin Cook oo u waramayay wargayska Sunday Mirror ee ka soo baxa England cadadkiisa maanta oo axad ah ayuu ku taliyay inuu doonayo inay ciidamada Britain ay ku soo laabtaan guryahooda kahor intaanan laga dilin tiro kale oo badan. WARKAN OO DHAN... GUJI HALKANI.. 30/3